Imisipha zidlala indima ebalulekile ekuphileni kwebantfu - zinikeza yethu motor umsebenzi, ukuphefumula, ukugwinya, ikhono lokuxoxa.
Kuyaziwa ukuthi isibalo umuntu ngamunye uzimisele zofuzo, ngakho cishe enjalo. Ngubani ukukhula imisipha?
Ngokwandisa izicubu ziqondwe ukwanda hypertrophy sarcoplasmic futhi zezicubu zezinzwa. Sarcoplasm uketshezi izakhi, esemgwaqweni phakathi imisipha kanye ezicutshini. Iqukethe izinqolobane of carbohydrate, amafutha, amino acid kanye enzyme.
Imicu yotshani zezinzwa ezibekwe emhlabeni imisipha, abavikele futhi sinamathela emathanjeni. Ngu ukuqeqeshwa kule izicubu khona microdamages, enxebeni elibangela uphakamise izwi. Yingakho kuphephile ukusho ukuthi ukukhula kwemisipha ngu-80% incike ukwanda ezicutshini obubazungezile.
Yiqiniso, ukuqeqeshwa amandla okuphumelela kangcono ukuze wandise yemisipha. Ngaphansi imithwalo ezifanele zenzeke hhayi kuphela microdamages ezicutshini, okuholela ukwanda yayo, kodwa futhi ukukhiqiza ama-hormone ngaphezulu.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izinhlobo ezahlukene ukuqeqeshwa ungathola izinguquko ezihlukahlukene zokuthomba ezicutshini. Akubalulekile nje kuphela ukukhetha elikhulu umthwalo futhi amandla umzimba, kodwa futhi banake imvamisa ukuqeqeshwa. Ngakho, ukusimama kwemisipha Imicu yotshani iqala ngaphakathi 4 Amahora ngemuva kokuqeqeshwa kanye uyaqhubeka cishe izinsuku ezimbili. Yingakho kakhulu njalo umthwalo imisipha iqembu esifanayo ingaphelele.
Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi the ningi NEMPUMELELO NGAPHAKATHI inqubo yokutakula kuyadingeka ukuze ngokufanele ukondla. Uma Ukudla akuyona amaprotheni ngokwanele ne-calcium, imisipha ukukhula kuyoba esincane.
Ukudla okunomsoco in kwesikhathi ukuqeqeshwa kubaluleke kakhulu, ngoba ukwakhiwa kwezicubu kwakudingeka zokwakha e ifomu amaprotheni, yi-keratin amino acid. Ngokuvamile le njongo abasubathi ukusebenzisa amaphilisi elahlukile kwemisipha ukukhula.
Ukudla nsuku zonke Kunconywa ukufaka amaprotheni ngokwanele (mayelana 2 amagremu kilogram of isisindo sakho umzimba ngalinye), okuyinto okuyisici esibalulekile kwesakhiwo kwezicubu. Kufanele kukhunjulwe ukuthi isidlo esisodwa kufanele ibe ngaphezu 30-40 amagremu amathathu amaprotheni, ngoba ngaphezulu kubo nje kungukuthi amuncwa wumzimba. Ngakho-ke, inani nsuku wamaprotheni kufanele basakaza ku 6 izinyathelo. Kuyadingeka ukusebenzisa isamba elanele carbohydrate, ngoba lapho bentula njengoba umthombo energy zithathwa izakhi okufanele uhambe ngayo ekukhuleni. Ukunakwa kufanele ikhokhwe futhi ukudla ikhalori, ngoba kubalulekile kwemisebenzi yoMnyango imisipha.
Ngaphezu umsoco ofanele futhi ukuqeqeshwa efanele sakhiwa kufanele inikwe indlela yokuphila enempilo. Abesilisa kaningi musa ukucabanga ukuthi ukubhema kuthinta ukukhula kwemisipha Nokho, qaphela ukuthi ukwenqatshelwa kagwayi kanye uphuzo oludakayo - yisinyathelo esibalulekile ukwandisa mass yabo. Lapho ukubhema nokusebenzisa kabi utshwala akunakwenzeka ukuze zithole imiphumela emihle. Kungani?
Lapho ukubhema amazinga testosterone encishisiwe, nokubuyiselwa imisipha Imicu yotshani ngenkathi ephawulekayo siyehla. Ngaphezu kwalokho, ugwayi kubangele ezihlukahlukene nezifo umgudu wokuphefumula, okungadingi uvumele olunzulu ukuqeqeshwa isisindo, futhi anda kwenhliziyo ngokumelene okwenza imithambo yegazi constricted kakhulu kuthuntubeza ikhono lomuntu kwegazi, futhi ngokuqinisekile hhayi isici esihle sokukhula zabo ngokushesha.